Mandoro an'i Amazona, may ny havokavon'ny tany! : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 August 2019	• 8 Comments
Na iza na iza mahatadidy fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Breziliana ankehitriny, Jair Bolsonaro dia karazana mpanao politika havanana manana elatra tena mampidi-doza ao amin'ny media, dia fantany avy hatrany fa miatrika olona manohana ny fandaharam-potoana manohitra ny fanatontoloana isika. . Olona mijoro ho tombontsoan'ny fireneny. Karazan'i Boris Johnson, Thierry Baudet, Donald Trump sy ireo mpanao politika manana elatra havanana izay afaka mahazo voninahitra kely, saingy resahina tsy hahomby amin'ny farany, satria ity no lohahevitra lehibe. Ny zava-drehetra sy izay rehetra miaro ny finoana na mino fa misy ny firaisana tsikombakomba (ary toa manohitra azy ireo) dia tsy maintsy manameloka ny Zwarte Piet noho ny tsy fahombiazana, ka ny feo mitsikera manohitra ny fanatontoloana sy ny klinika elitista taloha dia mifamatotra tanteraka io vondrona io izay nahatonga ny loza ara-toekarena.
Ka raha nilaza i Jair Bolsonaro fa ny ONG dia tompon'andraikitra amin'ny fandrehitra ny afon'ny Amazon, dia afaka nahita izany ianao ho toy ny hevitra tsikombakomba. Napetraka ny sary manerantany: eo ambanin'i Jair Bolsonaro, may ny havokavon'ny tanintsika tsy nirehitra intsony.
Mbola ilaina ihany ny mamerimberina foana ny famerenantsika fa tsy manana hevitra marina na tsia ny vaovao hitantsika na marina na tsia. Mbola tsaroanao ve ny fandosiran'ny mpitsoa-ponenana mankamin'ny sisintany meksikanina miaraka amin'i Etazonia? Mbola tsaroanao ve ny fivoaran'ny Ebola? Tsy naheno momba ny inona intsony isika raha vao vita ny fepetra tokony hamporisihany. Avy eo nanjavona tampoka toy ny oram-panala ny masoandro ny olana. Amin'ny fotoana mikoriana mankany amin'ny sisintany amerikana, Nasehoko ny fomba mora ahitanao ny olona ho be mijery rindrambaiko; ao amin'ny sary mihetsika. Androany dia mahita dokambarotra misimisy ihany ianao ao amin'ny media sosialy toy ny Facebook manolotra rindrambaiko mahafinaritra hanitsiana ny sary (jereo ohatra). Manjary mora kokoa ny manodinkodina sary sy feo. Na tsy fantatray aza hoe rehefa manana iray isika resadresaka nifanaovana tamin'i Bolsonaro na izy mihitsy ve no tenany sa mankany amin'ny iray fotsiny isika miovaova tarehy mipetraka mijery. Ny zava-dehibe tsotra izay inoantsika fa ny fantsom-baovao lehibe dia orinasa izay mampiasa olona an-jatony na an'arivony, ary ny sary anananay amin'ireo tovovavy milamina sy malefaka amin'ny akanjo, dia midika fa mino ny zavatra atolotra antsika isika.
Mandoro tokoa ve ny Amazon? "Eny, mbola mahita ireo sary ianao!?"Mbola tohizany ahy fa tsy mbola afaka manazava amin'ny olona fa tsy sary intsony ny sary. Ny sary dia manaporofo inona. Ny porofo tokana anananao rehefa mahita sary dia teo am-pitadiavanao ny efitranonao. Hitanao sary ianao. Izany no izy. Miaraka amin'ny rindrambaiko ankehitriny, afaka mamorona sy manodinkodina vetivety ny zava-drehetra. Topazo maso ilay horonan-tsary eto ambany mba hahitanao ny fomba ahafahan'ny tambajotra neural artifisialy (AI) ankehitriny manodinkodina sary ao anatin'ny segondra. Ny teknika mitovy dia ao ambadiky ny famoronana sary mihetsika (jereo eto). Mihevitra ianao fa "Eny, ho tonga daholo izany, saingy mino tanteraka aho fa mirehitra ny Amazon". Fantatrao ve ny antony? Satria hitanao amin'ny media sosialy sy amin'ny vaovao izany. Ny finoanao dia voafaritr'ireo izay tena tezitra aminao rehefa mandoa hetra kely izy ireo ary manana an'arivony tapitrisa ao amin'ny kaontin'izy ireo; izany vondrona elitisty kely. Ho hitanao mahamenatra fa misy andian’olom-bitsy vitsivitsy manintona ny harena rehetra, nefa tsy tsinontsinoavina ny fahitan’izy ireo ny fantsona media lehibe sy ny Internet ho fitaovana hilalao.
Lanin'ny afo ve ny Amazon? Tsy fantatsika! "Eny, fa fantatro kosa ny olona mipetraka any izay manamafy izany”Aiza no misy ilay olona mipetraka ary mipetraka eo an-toerana izy hijery ny afo na mahazo izany vaovao izany avy amin'ny vaovao ve? "Eny, fa any Brezila dia tsy handainga momba izany ve izy ireo? Iza no mandray soa avy amin'izany? Raha voatery nandao i Bolsonaro, tsy handrava ilay tetika ve ny haino aman-jery breziliana?", Azonao atao ny mifamaly. Dia hadinonao fa, toy ny tany Etazonia niaraka tamin'i Donald Trump (izay noheverina ho manohitra ny ady lalina), ireo mpanao politika dia mpisehatra fotsiny tsy maintsy mitazona fisehoana ary manao ny asany miaraka amin'ny haino aman-jery sy media hafa. Tsy ho tonga eo amin'ny fitondrana ianao raha tsy ambanin'ireo rà fika demokratika. Mety ho lavitra be ho an'ny maro izany, saingy jereo ny lahatsoratra farany momba an'i Ursula von der Leyen, filohan'ny EU (jereo eto) ary fantaro ny fomba fiasa izany.
Teo ny haino aman-jery mba hilalaovana ny vahoaka ary hanohana ny sangan'ny demokrasia. Ny mpanao politika sy ny haino aman-jery dia milalao interplay izay manara-maso ny sangan'ny tompona ary tsy maintsy mitarika ny mponina amin'ny lalana efa voalahatra mialoha, tsy fantatra akory fa milalao manontolo andro amin'ny alàlan'ny fihetsika, fitaka ary fitaka.
Ity "marika Amazon" ity dia miovaova fotsiny amin'ny fomba fijery politika ary ny fifanarahana miaraka amin'ny marika eo ankavanana. Ankoatry ny zavatra hafa, manana ny fanazavako amin'ny antsipiriany momba io fizotran-javatra io sy ny famaritana ny varotra amin'ny ankavanana ianao ity lahatsoratra ity nomena. Vakio indray io lahatsoratra io ary tadiavo hoe manao ahoana ny lalao.
Tags: eto an-tany, doro ala, doro ala, marika, Featured, Jair Bolsonaro, havokavoka, mazone, ONG
Anna de Winter nanoratra hoe:
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 09
Matsiro! Misaotra anao nanoratra hoe ahoana ny fandehany ... izay tena noheveriko rehefa nahita tampoka "vaovao" tonga tamin'ity ...
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 11
Mampahatsiahy ahy indray izany horonantsary izany raha afaka manorina zavatra toa izao isika eto amin'ity tontolo ity amin'ny alàlan'ny dikan'ny ankizy tsotra. Mora ange ny manao zavatra tahaka an'izao tontolo izao ka hiresaka momba ny aventar?
DHBoom nanoratra hoe:
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 59
Ny namako iray mipetraka any Brezila, ao Sao Paulo ... Nieritreritra koa aho fa hizara izany vaovao izany aminao, satria nisy ny resaka tao amin'ny haino aman-jery ho maizina amin'ny alina noho ny setroka rehetra. Tsy misy avy aiza e !! Nalefako azy ny sarintany fampahalalam-baovao mahazatra momba izay ambara eto ary nilaza izy fa tsy misy izany.
Amin'ny fomba ahoana no mahatonga ny haino aman-jery midadasika fa mahatsikaiky ... Na iza na iza ny fisainana tsotra mahalala fa misy zavatra toy izany miaraka amin'ny fanontaniana tsotra dia azo antsoina hoe vaovao sandoka amin'ny alàlan'ny fanontanian'ny namana mipetraka ao?!
Nanana ny fisalasalako be momba ny vaovao daholo aho, saingy vokatr'ity tantara ity dia very tanteraka ny fahatokisan-tena .. Maharikoriko ...
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 12: 49
Tsy azoko atao ny manamarina ny valin-teninao (izay mihatra amin'ny ankapobeny), fa raha marina ny tantaranao dia misy andian-tafika tranainy foana miandry anao hitaky ny mifanohitra aminy (mpiasa karama miambina amin'ny resaka media sosialy).
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 42
Oh eny ... raha te hisintona ilay poketra fotsiny ianao:
Ny famonoana ala mahatsiravina any amin'ny ala zoma any Amazona dia tsy azo fehezina ary tsy miato isan'andro. Sarobidy ho an'ny biby sy ny olona ny Amazon, ary amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Izany no antony nanombohan'ny WWF fampielezan-kevitra maika. Fa miaraka matanjaka kokoa izahay, koa ampio. An-tsoratra AMAZONE amin'ny 4333 izao ary manome vola 3 euro. Afaka mandefa hafatra an-tsoratra araka izay tianao foana ianao! Te hahafantatra bebe kokoa? https://www.wwf.nl/kom-in-actie/noodactie-bosbranden
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 46
Oh eny ary aorian'ny fandefasana ny vola ho an'ny Porsche vaovao ho an'ny talen'ny varotra dia mazava ho azy amin'ny fomba mahasoa ny volanao. Mety hisy hazo vaovao sasany kasaina ao amin'ny valan-javamaniry Apeldoorn, saingy mazava ho azy fa be ny fanaovana dokambarotra amin'ny TV dia tsy maintsy vidina sy ny dokambarotra lafo vidy ao amin'ny magazine, hany ka lasa olona maro no lasa mpikambana. Izany no zava-dehibe indrindra.
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 21: 20
Loka ambony miaramila
NY miampy sy tsy ampy taona dia namorona angovo eo amin'ny tontolon'ny tontolo tahaka ny miampy & minus, Christ / anti Christ, tsara / ratsy, snsetera
Seasheprd tsy misy volo ankoatry ny hafa, ny olona dia midika hoe tsara ilay mpirotsaka an-tsitrapo fa ny talen'ny handeha amin'ny latabatra miaraka amin'ny orinasa hafahafa
Filoha Osama nanoratra hoe:
24 Aogositra 2019 ao amin'ny 00: 25
Nilaza ny NASA fa vitsy ny doro ala:
5.000 toy izany fa tsy 15.000 12 taona lasa izay.
Mazava izao fa tsy maintsy i Bolsonaro.
« Hisy lohany ve mifamadika amin'ny raharaha Jeffrey Epstein?
Inona no marina ny fanafihana amin'ny fahafatesana vokatry ny pedophile any Assen? »
Total fitsidihana: 4.141.192